University of Oxford - Study in England, UK. Imfundo eYurophu
University of Oxford Yokuxhumana
isifinyezo : Oxford
Wasekelwa : 1096
Ungakhohlwa xoxa University of Oxford
Bhalisa at University of Oxford
The University of isakhiwo Oxford sika olwehlukanisa, ozelwe umlando walo, uwumthombo wamandla.
Oxford is a enyuvesi Collegiate, eyayakhiwa central University nasemakolishi. Inyuvesi central yakhiwa iminyango zezemfundo izikhungo zocwaningo, iminyango zokuphatha, imitapo neminyuziyamu. I 38 amakolishi izikhungo ozibuse futhi ngizimele ngokwezimali, okuyinto zihlobene ephakathi University in uhlelo federal. Kukhona futhi amahholo ayisithupha unomphela yangasese, eyayibonakala esasungulwa amahlelo bamaKristu futhi lapho namanje mayibambe uhlamvu kwabo kobuKristu.
Indima ezehlukene colleges kanye neNyuvesi ziye zashintsha ngokuhamba kwesikhathi.
Khetha mukela abafundi undergraduate, bese ukhetha abafundi graduate ngemva kokuba wamukelwa University.
Nikeza indawo yokuhlala, zokudla, amakamelo ezivamile, imitapo, ezemidlalo kanye zomphakathi, kanye nokunakekelwa wokwelusa abafundi babo.
Ingabe elibhekele okokufundisa zokufundisa undergraduates.
Inquma okuqukethwe izifundo ngaphakathi ekolishi imfundiso lwenzeka.
Uhlelembisa izinkulumo, izinkulumo kanye nomsebenzi lab.
Inikeza anhlobonhlobo kwemithombo yokufundisa nokufunda ngesimo imitapo, laboratories, iminyuziyamu, Computing izikhungo, njalo njalo.
Inikeza imisebenzi yokuphatha kanye liphakathi zokunakekelwa umfundi ezifana ukwelulekwa nemisebenzi.
Iyavuma futhi yengamele abafundi graduate, uhlola iziphakamiso.
Amasethi kanye namamaki izivivinyo, kanye nemiklomelo degrees.
Uhlelo Collegiate kuwumgogodla empumelelo yeNyuvesi, enikeza abafundi nezifundiswa izinzuzo zomhlatshelo okuqondene kokubili kuya enkulu, nasemhlabeni wonke isikhungo futhu esigabeni esincane, umphakathi imikhakha eyahlukene academic. It kuletha ndawonye izifundiswa abakhulu abafundi kuzo zonke izifundo kanye namaqembu unyaka futhi letiphatselene nemasiko lahlukene kanye namazwe, esiza kuphocelela okukhulu ndlela imikhakha eyahlukene ukuthi usenza okuningi ezivelele ucwaningo ukuzuzwa kwemiPhumela University futhi kwenza Oxford umholi bakhe emikhakheni eminingi kangaka.
Faculty of IsiZulu Ulimi kanye nezincwadi zokufunda
Faculty of Linguistics, kolimi & Ifonetikisi
Ithoshi Oxford Research Center ku-Humanities
Faculty of Izilimi Medieval Nezanamuhla
UMNYANGO, Umlando Art
Faculty of Theology Nenkolo
zezibalo, NGOKWENYAMA & Life Sciences UPHIKO
Life Sciences Interface zobudokotela Training Centre
UMNYANGO Earth Sciences
UMNYANGO Plant Sciences
UMNYANGO Computer Science
UMNYANGO Engineering Science
Medical Sciences UPHIKO
UMNYANGO Psychology kokulinganisa
USir William Dunn SCHOOL OF Pathology
NUFFIELD UMNYANGO Population Health
NUFFIELD UMNYANGO Sciences Steel
NUFFIELD UMNYANGO Medicine Clinical
Radcliffe UMNYANGO Medicine
NUFFIELD UMNYANGO amathambo, Rheumatology kanye zemisipha Sciences
NUFFIELD UMNYANGO Primary Health Care Sciences
NUFFIELD UMNYANGO Neurosciences Clinical
NUFFIELD UMNYANGO zokubelethisa and zabesifazane
UMNYANGO Physiology, Anatomy & Ufuzo
NABANTU LULWIMI UPHIKO
ISIKOLE OF Anthropology futhi Museum Ethnography
BLAVATNIK SCHOOL OF Uhulumeni
Oxford Inthanethi Institute
UMNYANGO Ezombusazwe Wezangaphandle
ISIKOLE OF Archaeology
ISIKOLE OF imikhakha eyahlukene Area Ucwaningo
Oxford-MAN INSTITUTE OF quantitative Ezezimali
Wathi Business School
Social Policy kanye Ukungenela
njengoba eyunivesithi endala kakhulu emhlabeni abakhuluma isiNgisi, Oxford uyilungiselelo eliyingqayizivele futhi mlando. Akukho usuku ecacile isisekelo, kodwa imfundiso owawukhona wafunda e-Oxford oluthile e 1096 futhi lakhula ngokushesha kusukela 1167, lapho uHenry II uvinjelwe abafundi English khona-University of Paris.
Ngo 1188, mlando, Gerald of Wales, wanikeza ekufundeleni kuya ababebuthene Oxford dons futhi emhlabeni 1190 ukufika Emo Friesland, umfundi kwezilwandle yokuqala eyaziwayo, waqalisa isiko izixhumanisi ngamazwe wesazi yeNyuvesi. By 1201, University babenezinkinga ngumuntu School Oxenford, onikezwe isihloko Shansela ukuthi gunya 1214, futhi 1231 amakhosi zaqashelwa njengendlela eyunivesithi noma inkampani.
Ekhulwini le-13, imibhikisho enobudlova phakathi edolobheni futhi ingubo (bendawo nabafundi) washesha ukusungulwa amahholo bakudala lokuhlala. Lezi zinto zabe lulandelwe ngowokuqala kwamakolishi Oxford sika, eyaqala medieval 'amahholo lokuhlala’ noma endowed izindlu ngaphansi kokuqondisa Master. University, Balliol futhi Merton Amakolishi, okuyinto Kwamiswa phakathi 1249 futhi 1264, kukhona omdala.
Ngaphansi kuka eyikhulu kamuva, Oxford esewenzile ukuphakama kwawo wonke amanye esihlalweni yokufunda, futhi ngek ngezindumiso opapa, amakhosi kanye zo esenziwa zasendulo yayo, ikharikhulamu, imfundiso namalungelo. Ngo 1355, Edward III uncome University ngendima abayidlalile wabasiza kakhulu yokufunda; naye ubeke amazwana amasevisi elihunyushwe esimweni ngu avelele Oxford abathweswe iziqu.
Kusukela ezinsukwini zayo zokuqala, Oxford yayiyisikhungo ngoba impikiswano eshubile, nezazi ehilelekile izingxabano zenkolo nezombangazwe. John Wyclif, Master yangekhulu le-14 ka-Balliol, mkhankaso a ngeBhayibheli ngolimi lwabo lomdabu, ngokumelene izifiso lopapa. Ngo 1530, UHenry VIII ophoqelelwe University ukwamukela isehlukaniso yakhe kusukela noCatherine wase-Aragon, futhi ngenkathi yeziNguquko ngekhulu le-16, le abantu abasontayo Anglican uCranmer, Latimer futhi Ridley balingwa ngokuba imbuka wasishisa esigxotsheni ngo Oxford.
Inyuvesi kwaba Royalist e kulwiwa, noCharles Ngabamba esiphikisayo ePhalamende iKhonvokheshini House. Ekupheleni kwekhulu le-17, Oxford sefilosofi John Locke, esolwa ngokuba imbuka, waphoqeleka ukuba abalekele ezweni.
Ngekhulu le-18, lapho Oxford okwakuthiwa port eshiyiwe kwezombusazwe, wayebuye inkathi ngokusungula izinto zesayensi kanye inkolo iyavuselelwa. Edmund Halley, UProfesa Jiyomethri, ezibikezelwe ukubuya le inkanyezi enomsila elibizwa ngegama lakhe; UJohn no imihlangano umthandazo Charles Wesley sika wabeka izisekelo LaseWeseli Umphakathi.
Inyuvesi Kusolwa indzima lesembili kwenkathi uVictoria, ikakhulukazi impikiswano zenkolo. Kusuka 1833 kuqhubeke Oxford Movement wafuna ukuvuselela izici yamaKatolika Isonto le-Anglican. Omunye umholi walo, John Henry Newman, waba inkolo yamaRoma Katolika e 1845 futhi kamuva wenza Cardinal. Ngo 1860 entsha University Museum kwaba yesehlakalo inkulumo mpikiswano adumile phakathi okuthiwa uThomas Huxley, iqhawe yokuziphendukela kwemvelo, futhi Bishop Wilberforce.
Kusuka 1878, amahholo zezemfundo Kwamiswa kwabesifazane futhi zingeniswe babe amalungu agcwele esizwe University e 1920. Five amakolishi zonke-besilisa kuqala wavuma abesifazane e 1974 futhi, kusuka lapho, wonke amakolishi zishintshile ngezimiso zawo ukuvuma kwabesifazane nabesilisa. St Hilda lokuhlelemba, okuyinto wayedabuka kwabesifazane kuphela, wayengowokugcina ubulili amakolishi Oxford ongashadile. It usevumile kokubili amadoda nabesifazane kusukela 2008.
Phakathi 20 leminyaka nasekuqaleni 21, Oxford ukungezwa enkabeni yalo neyobuntu umthamo ucwaningo ezinkulu entsha in the natural sciences kanye isicelo, kuhlanganise imithi. Ngokwenza kanjalo, ke siye sathuthukisa futhi kwaqinisa indima ngendlela yakudala njengoba i focus ngamazwe yekufundza isithangami mpikiswano bokusungula.
Uyafuna xoxa University of Oxford ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
University of Oxford kumephu
Izithombe: University of Oxford Facebook ezisemthethweni
University of Oxford Izibuyekezo
Joyina ukuxoxa University of Oxford.